नाभासले रियलका खेलाडीहरूसँग मागे माफी !
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलनाभासले रियलका खेलाडीहरूसँग मागे माफी !
एजेन्सी, २ असोज । युरोपको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडलाई हरायो । बुधबार राति भएको समूह चरणको खेलमा पीएसजीले रियलविरुद्ध ३–० गोलको सहज जित निकाल्यो ।
आफ्नै घरेलु मैदानमा भएको उक्त खेलमा पीएसजलाई जिताउन एन्जल डी मारियाले २ तथा थोमस मुनियरले एक गोल गरेका थिए । उक्त खेलमा रियलका पूर्वगोलकिपर तथा पीएसजीका वर्तमान गोलरक्षक केयलर नाभासले पनि खेलेका थिए ।
यसै सिजन रियलबाट पीएसजी गएका उनले फ्रेन्च क्लबबाट च्याम्पियन्स लिगमा डेब्यू गरे । खेल जितेपछि उनले रियल मड्रिडका बारेमा टिप्पणी गरेका छन् । खेलपछि बोल्दै नाभासले खेल मैदान प्रवेश गर्नुअघि आफ्ना साथीहरूलाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देख्दा अफ्ठेरो लागेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैदान प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रवेशद्वारमा मैले रियल मड्रिडका खेलाडीहरूलाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखेँ, जब मैले त्यस्तो देखेँ । मलाई असह्य भयो ।’
यस्तै नाभासले रियलका पूर्वसहकर्मीहरूसँग माफी मागेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘म उनीहरूसँग माफी माग्छु तर हामीहरूबीचको मित्रता निरन्तर चलिरहनेछ ।’
रियलमा दोस्रो रोजाइको भूमिका बहन गर्नुपर्दा आफू दुखी रहेको भन्दै उनी फ्रान्स गएका थिए । रियलमा पहिलो रोजाइको भूमिकामा थिबाओ कोर्टुआ रहेपछि उनी दोस्रो रोजाइमा थिए । कोर्टुआ घाइते भएका बेला मात्र नाभासले टोलीमा स्थान बनाउथे, अन्यथा उनको स्थान बेन्चमा नै हुन्थ्यो । यसैकारण रुष्ट उनी क्लब छोड्दै पीएसजी गए ।